Matongerwo eNyika, 12 Kurume 2018
Muvhuro 12 Kurume 2018
Kaputeni weCaps United Zvirekwi Ochekwa Ruoko paChanza Mushure meTsaona
Mutambi wechikwata cheCaps United anovazve kaputeni wechikwata ichi, Hardlife Zvirekwi akakuvara zvakaipisisa munjodzi yemotokari muHarare zvakapa kuti vanachiremba kuchipatara cheParirenyatwa Group of Hospitals vamudimbure ruoko.
Mupurisa weKutuka VaMugabe neMudzimai Wavo Okandwa Mujeri kweMazuva
Mumwe mupurisa sajeni Thompson Joseph Mloyie vakakandwa mujeri kwemazuva gumi vachivapomera mhosva yekutuka vaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe muna 2016.
SADC Yoita Misangano Yekuongorora Mamiriro Akaita zveSarudzo muNyika
Sachigaro wesangano revaongorori vesarudzo veSADC Electoral Advisory Council vaita misangano nevatori venhau Leshele Thohlane nemusi weMuvhuro vakaita musangano negurukota rezvekudyidza nedzimwe nyika Dr Sibusiso Moyo kumahofisi avo eMunhumutapa muHarare.
Kuwandirwa neBasa Kwotadzisa VaMnangagwa Kusangana neVakarwa Hondo
Vari kuda kusangana naVaMnanagwa vanosanganisawo vanachimbwido navanamujibha nevamwe vakambosungwa munguva yehondo.
Kurume 11, 2018
SADC Yotumira Vaongorori veSarudzo Kuzoona Kuti Gadziriro Yave Papi muZimbabwe
Vaongorori vesarudzo kubva kusangano reSADC vange vachitarisirwa kupinda munyika nemusi weSvondo kuti vamboshanda kwemazuva manomwe anotevera vachiona zviri kuitwa mukugadzirira sarudzo dzegore rino.
VanaChiremba Voramba Mashoko aDr Parirenyatwa eKuti Vave Kudzokera kuMabasa
Mutungamiri wesangano ravanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Mxolisi Ngwenya varamba mashoko ari kutaurwa negurukota rezvehutano Dr David Parirenyatwa ekuti vanachiremba vave kudzokera kumabasa sezvo zvichemo zvavo zvagadziriswa.
Reverand Doctor Kenneth Mtata mufundisi muchechi yeLutheran asizve ndivo munyorimukuru we Zimbabwe Council of Churches.
Mutungamiri weNPP, Amai Mujuru, Vanoshora Mapato eZanu PF neMDC-T
Vachitaura pamusangano webato ravo pamusangano waitwa muTafara muHarare East Constituency, Amai Mujuru vati Zanu PF yauraya hupfumi hwenyika uye bato reMDC-T rawondonga makanzuru emaguta nemaruwa, vachiti vanhu havafaniri kuvhotera mapato maviri aya musarudzo dzegore rino.
MDC Alliance Yoita Musangano kuCross Dete
Mubatanidzwa weMDC Alliance nhasi waita musangano nevatsigiri wawo kuCross Dete kuMatabeleland North uko vakuru vemapato ari mumubatanidzwa uyu vange varipo vese.